Ntụrụndụ | November 2021
Ozi siri ike 10 Beyoncé na -eziga Jay Z na Lemonade - ma ọ bụ ihe anyị chere
2021 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Ntụrụndụ
Ọ bụ ezie na ọ mepụtara album dị egwu maka anyị niile, ọ dị ka ihe doro anya na ọ na -agwa naanị otu onye okwu.
Otu nwa agbọghọ na -agba asịrị hụrụ nnukwu mmejọ ejiji nke ị gaghị enwe ike ịchọpụta
Onye ọrụ TikTok mere ka ọ pụta ìhè mmejọ ejiji na -atọ ọchị na 'Gossip Girl', na ọtụtụ puku ndị egwu na -ekwu maka ya.
Di na Nwunye kacha ewu ewu na 2018
N'ebe a, ndepụta nke di na nwunye 13 kachasị ama ama nke hụrụ mmebi, mmebe, ntinye aka, alụmdi na nwunye, na ịgba alụkwaghịm na 2018.
Hilarie Burton na -echeta ihe nkiri nwoke na nwanyị nke otu osisi ugwu hapụrụ ya na -ebe akwa ya
Hilarie Burton ka mepere otu ahụmịhe nke mere ka anya mmiri gbaa ya na setịpụrụ 'Otu Osisi Ugwu.'
Oge 11 Seinfeld dị egwu Anyị enweghị ike ichere ịtụkwasị Hulu - na GIF!
Ọ bụrụ na ị nụbeghị, Seinfeld bụ usoro nzuzo kachasị ọhụrụ iji nweta nkwekọrịta nkwanye ugwu: Oge itoolu nke '90s kpochapụwo ga -akụ Hulu na June a, na nkwekọrịta ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde $ 180, dị ka iche iche si kwuo. Nke ahụ pụtara na ịgaghị ekpochapụ DVD gị ma ọ bụ gee TBS n'anyasị ọ bụla n'elekere isii nke ụtụtụ. iji mezie Jerry, George, Elaine, na Kramer gị-ị ga-enwe ike ilegide anya na-achọ, ka masịrị gị. Nke a bụ oge pụrụ iche iri na otu anyị enweghị ike ichere ka anyị lelee ugboro ugboro (mana rue June, GIF ndị a ga-eme). Man Hands (Oge 8, Episode 3) Afọ ahụ bụ 1996: 'Aka mmadụ' batara n'okwu anyị, na mkpakọrịta nwoke na nwanyị gbanwere mgbe ebighi ebi. Ịgba egwu Elaine (Oge 8, Episode 4) Amaara m na ọkụ ndị ahụ agbaala n'ime ụbụrụ gị ruo ọtụtụ iri afọ. Na -ewebata: Festivus (Oge 9, Nkeji 10) Ezumike adịgboroja kachasị amasị anyị iji mee ememme na Disemba 23. The Puffy Shirt (Season 5, Episode 2) Ọ dịtụla ụdị uwe a kacha mara amara n'akụkọ ihe mere eme nke TV? Bịa Ya na Dingo (Oge 3, Nkeji 10) Ogologo oge ole ka o were gị ịchọpụta ntụpọ dingo Elaine? Ihe nkuzi na ọdụ ụgbọ oloko ụzọ ụgbọ oloko (Oge 3, ihe nkiri
Ajụjụ ọnụ a Lindsay Lohan-David Letterman Site na 2013 na-eme ka ahụ ghara iru ndị mmadụ ala
N'ajụjụ ọnụ abalị 2013 n'etiti David Letterman na Lindsay Lohan 'na-emenye ụjọ' ọtụtụ ndị ọrụ Twitter.
5 Egwu Groove-tastic Anyị enweghị ike ịkwụsị ige ntị!
Anyị abịaghachila na nkeji nkeji nke 'Abụ m enweghị ike ịkwụsị ige ntị' maka egwu ọhụrụ Mọnde nke izu a. N'oge na -adịbeghị anya, anọwo m na -ebugharị Shazam, yabụ enwere m mmetụta na a manyere m ịkekọrịta ọ bụghị otu, mana ise n'ime nchọpụta m kacha achọsi ike n'oge na -adịbeghị anya. Ndepụta a gụnyere ụdọ nwanne abụọ na ọtụtụ egwu egwu ị nwekwara ike tinye n'okpuru egwu egwu. Gee ntị, lee, ma mata ndị otu egwu dị n'okpuru. Ka anyị mara ihe ị chere!
Ileghachi azụ na Brad Pitt na Angelina Jolie na Oscars n'ime afọ (Malite mgbe Angie dị afọ 10 ...
Ọ dị mma ịsị na Brad Pitt na Angelina Jolie ga -abụ di na nwunye kacha ese foto na Sunday Academy Academy. Ọkụ ọkụ ọkụ na -apụ dị ka ọkụ ọkụ ọkụ na klọb ozugbo ha rutere ebe ọ bụla, yabụ na ị nwere ike were naanị ọbịbịa ha mee mmemme kacha ukwuu n'afọ. Agbanyeghị na ha agaala ihe ngosi a ma ama ọnụ naanị otu ugboro-na 2009 mgbe ọ na-eyi uwe ojii Elie Saab na ndị ga-anwụ maka Lorraine Schwartz ọla ntị emerald-ha abụọ nwere Oscar ogologo akụkọ. Ka anyị leghachi anya azụ n'ọdịdị ha (yana ụbọchị dị iche iche!) N'ime ọtụtụ afọ ...
Ndị Bachelor na Bachelor di na nwunye ka nọkọkwara: Ndepụta zuru oke
Kedu ndị 'Bachelorette' na 'Bachelor' di na nwunye ka nọkọtara ọnụ? Ka anyị leghachi anya azụ na ọganiihu nke ndị di na nwunye 'Bachelor' na 'Bachelorette' gara aga.
Ndị na -agụ abụ na otu ụmụ nwanyị kacha mma na YouTube
Ị maara ezigbo enyi gị ahụ nke na -ejikwa anwansi na -ahazi ihe niile dopey na YouTube wee chọta ndị egwu ọhụrụ na -eri ahụ? Ekele, ugbu a ị bụ ezigbo enyi ahụ. Debanye aha na ọwa ụmụ agbọghọ ndị a ugbu a, yie ka amamịghe mgbe ha ga -agbawa ma emechaa. DANIELA ANDRADE Andrade nwere otu n'ime olu ndị ahụ na -eme ka ihe niile na -emetụ n'ahụ - enwere m ike ikwu nke a mgbe m gere ntị mkpuchi ya onye ọ bụla site na Nirvana ruo Beyonce. Achọrọ m ka ọ mee ụda ụda niile na ihe dị mma, stat. JAMIE GRACE Grace, onye dị naanị afọ 20, bụ ihe ama ama dị n'ịntanetị - ụda boppy ya na -adọrọ adọrọ nke ukwuu, na egwu ya na -atọ ụtọ ma na -atọ ụtọ. VALENTINA LISITSA Ọ bụrụ na ị hụrụ Lindsay Stirling n'anya na-emebi emebi, Valentina bụ ihe na-akụda gị ọzọ-ọ na-ewepụta klaasị piano na nkenke na ịdị egwu. Ihe akaebe na ihe oge gboo nwere ike ime ka ụbọchị gị nwee ọmarịcha dịka Iggy Azalea na -eme. CIMORELLI Hụrụ nke a n'anya: Nwanne nwanyị isii nke Cali bụ ndị otu nwere ume dị elu nke na-eme ka mkpuchi mkpuchi dị oke mma. (Ka a sịkwa ihe ụdị ha nwere 'Nsogbu,' nke dị n'elu, nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nde atọ.) Kaa akara okwu m: Ha ga -enweta ihe nkiri TV nke egwu ha n'afọ na -abịa.
Ahụrụ m foto ndị a na-adọrọ adọrọ nke oge okpomọkụ nke Elizabeth Olsen na Dakota Fanning Shooting Ezigbo ụmụ agbọghọ n'anya.
Ọ na -ekpo ọkụ, na -ekpo ọkụ, na -ekpo ọkụ na New York. Ọ bụ maka oge. Ma enwere m nzọ na ọtụtụ ihe a ga-agba ebe a n'oge ọkọchị ga-ejedebe na-ele TV anya zuru oke-ọ nweghị ihu mmadụ ga-enwu gbaa, uwe ọrụ ga-adịkwa ka ọ ga-adịrị mfe.
Zute Natalie, Emily, na Alyvia Alyn Lind: Nwanyị nwanyị ga -eweghara Hollywood
Natalie, Emily na Alyvia Alyn Lind ga -eme ihe nkiri na nnukwu na obere enyo ọdịda a. Nke a bụ ihe mere ha ga -eji nọrọ ogologo oge.
Ihe ngosi Naya Rivera kacha mma na ọ joyụ nke agaghị echefu echefu
Lelee arụmọrụ kacha mma Naya Rivera dị ka Santana Lopez na ihe nkiri Fox kụrụ 'Glee,' site na 'Landslide' ruo 'Valerie.'
Ndị ama ama na ndị nne na nna ama ama 35 I chefuru kpamkpam
Ụmụ ndị a ma ama na Hollywood ejirila aha ha ketara wee malite ọrụ nke ha. Nke a bụ ndepụta ndị ama ama na nne na nna a ma ama.
7 Nwanyi 2012 Ndị Olimpik nke Oge A na -afụcha uche anyị
Maka oge mbụ, US na -eziga ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị egwuregwu n'egwuregwu Olympic karịa ụmụ nwoke. Zute asaa n'ime kpakpando ndị ahụ dị egwu ebe a-wee jikere ị cheụrị ọ inụ na London.
Kourtney Kardashian na Travis Barker Asụsụ metụrụ aka n'ụzọ nkịtị na MTV VMAs 2021
Kourtney Kardashian na Travis Barker metụrụ asụsụ aka n'ụzọ nkịtị na MTV VMAs 2021. Ọ bụ mpụta mbụ kapeeti uhie dị ka di na nwunye.
Nke a bụ otu Julia Roberts si mechie na mmemme ndị enyi ahụ akara ngosi
Ndị cocreators nke 'Enyi' kpughere otu Julia Roberts si bụrụ kpakpando ọbịa na 'Otu Mgbe Superbowl gasịrị'
Anne Hathaway nwere obi ụtọ na mmegharị nke ndị amoosu
Anne Hathaway na -enwe nkụda mmụọ na mmegharị 'The Witches'. Ọ bụ ọmarịcha arụmọrụ nke nrọ m.
2 Ga-ahụrịrị ihe nkiri maka Ya: Anyị bụ Millers na Don Jon
Ọ bụ ihe kacha mma mgbe otu n'ime ndị ọkacha mmasị gị nwere ihe nkiri ọhụrụ n'ụzọ, ọ kakwara mma (ka mma karịa!) Mgbe mmadụ abụọ n'ime ha mere. Taa, ndị abụọ ahụ bụ Jennifer Aniston, onye nwere Anyị bụ ndị Millers na Ọgọstụ, yana Joseph Gordon-Levitt, onye nwere Don Jon na Ọktoba 18. Na BTW, nke ahụ abụghị njedebe nke ọkacha mmasị anyị na fim ndị a-ọ bụghị site na ogologo oge. Ụfọdụ ndị enyi anyị dị ka Ed Helms, Jason Sudeikis, Emma Roberts, Nick Offerman, na Scarlett Johansson na -apụ, n'etiti ndị ọzọ. Chee echiche: Ee. Ọ dị m ka anyị bụ ndị Millers ga-abụ ndị ọchị-yana Breaking Bad laa azụ n'otu ọnwa ahụ, ọ bụ ọnwa nke ihuenyo RV n'ihu ọha-yana Don Don nwere nkwa nke ukwuu ime ka anyị ghara ịhụ JGL n'otu ụzọ ahụ. ọzọ, ọ masịrị m. Na ịnwụ maka Jerseylicious Scarlett. Kedu n'ime ndị a ị ga -ahụ? Foto: IMDB
Akụkọ niile na-eyi egwu na-adị ndụ bụ akụkọ akụkọ egwu America
Ryan Murphy nke ọhụrụ akụkọ akụkọ ihe mere eme nke America, ụlọ nkwari akụ, ga -ebido n'abalị a, iji mee ka akwara anyị na -atụ ụjọ. Edebere ọtụtụ nkọwa gbasara oge ọhụrụ nke ọma, mana ihe anyị maralarị bụ na Hotel nwere ihe nkedo dị ịtụnanya - yana ụfọdụ akụkọ akụkọ gbanyere mkpọrọgwụ n'eziokwu. Murphy kpughere na ụlọ nkwari akụ dị n'etiti atụmatụ ahụ, Hotel Cortez, dabere na Los Angeles 'Hotel Cecil, ebe ọtụtụ ndị na -egbu ọchụ nọrọla (Richard' the Night Stalker 'Ramirez, Jack Unterwerger) na ebe nwa agbọghọ, Elise Lam . (Na-ekwu maka ihe na-emenye ụjọ) Nke a bụ ezigbo akụkọ iri na -emenye ụjọ nke gosipụtara na akụkọ akụkọ egwu America - gụọ ya ma ọ bụrụ na ị daa. Oge 1: Ụlọ igbu ọchụ Black Dahlia Mena Suvari pụtara na mmemme nke oge izizi dịka Elizabeth Short, onye na-eme ihe nkiri kacha mara amara dị ka 'The Black Dahlia.' Short bụ onye na-eme ihe nkiri dị afọ 22 na-achọsi ike mgbe achọtara ya
ụdị agba ntutu ọhụrụ 2021
nne onyinye onyinye echiche
ahụ ebili mmiri tupu na mgbe ọ gachara